Stefan Lövfen oo cambaareeyey muhaaradkii ay cunsuruyiintu dhigeen | Somaliska
Ra’iisal wasaaaraha dalkaan Iswiidhan Stefan Lövfen, ayaa cambaareeyey banaanbaxyo ay kooxaa madaxa faquuqa qaba ee cunsuriyiinta ahi ka dhigeen magaaladda Gteoborg malintii axadii hore.
Kooxdan cunsuriyiinta ah ayaa maalintii axaddi ka dhigay banaanbax bartamaha magaaladda Göteborg, xilli aaneey heeysan ogolaansho, balse adeegsaday awood ay ku doonayaan ineey muujiyaan fikirkood guracan ee cabsi gelinta ah. Banaanbaxa kooxdan ayaa sidoo kale waxaa uu dhalay guux xoogan oo ay qeybaha kala duwan ee bulshadda.Ka dib banaanbaxii kooxdan ayaa dowladda iskugu yeertay asxaabta siyaasadeed ee dalka si looga arrinsado sidda looga hortigi lahaa kooxahan dimoqraadiyadda ka soo horjeeda.
“-Waan ka xumahay falkaasi, waxaana muuqata kooxahaasi qaarkood in ay si tijaaba ah xadka uga soo gudbayaan iyagoo dhigaya mudaharaadyo aysan ogolaasho u heysan, waana in arrinkaan wax laga qabta”, ayuu yiri Stefan Löfven.
Dhinaca kale kooxdan oo lugu magacaabo “Naziyiinta cusub ee wax iska caabinta Nordi-ga” oo marka la soo gaabiyo loo yaqaan NMR ayaa la filayaa in dhamaadka bishan ay banaanbax qabtaan kuwaas oo haatan u muuqda ineey ogolaansho heeystaan ama la siiyey. Ugu dambeyntiina kulankii ay dowladda ugu yeertay xisbiyadda siyaasadda ayaan lugu casuumin xisbiga cunsuriga ah ee SD.
Xisbiga Miljöpartiet maku khasaaray olalihii reeraha Soomaalida?
Xaflad sagootin ah oo loo sameeyey danjiraha Iswiidhan ee la badalayo